पशुपति क्षेत्रमा 'तिलगंगा–ताम्रागंगा' सुरुङ निर्माण हुने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
पशुपति क्षेत्रमा ‘तिलगंगा–ताम्रागंगा’ सुरुङ निर्माण हुने
मङि्सर ०१, २०७४ 1800 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले पशुपति क्षेत्रमा आवागमन व्यवस्थित गर्न गुहेश्वरीदेखि तिलगंगा आँखा अस्पतालसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको छ । पवित्र धार्मिक क्षेत्र वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाउने उद्देश्यअनुसार सडकको विकल्प खोजिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेको तिलगंगा–ताम्रागंगा सडक खण्ड विस्थापित गरी गरी साढे ८ सय मिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ । दस वर्षअघि स्थानीयको सक्रियतामा सञ्चालनमा आएको सडक बन्द गरी विकल्प सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागिएको काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृति संघ (युनेस्को) ले पुरातत्व विभागलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएपछि सडकको विकल्प खोजिएको हो । धार्मिक तथा सांस्कृति महत्व कायम राख्न पनि सरकारले सतहको सडक बन्द गरी सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना बनाएको छ ।
सुरुङ निर्माण गर्न सात वर्षअघि नै ठेक्का भएको थियो । तर, पुरातत्व विभागका कारण निर्माण सुरु भएको थिएन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त सडकको दुवैतर्फ पर्खाल लगाउन ठेक्का समेत आह्वान गरेको थियो । तर, स्थानीयले आपत्ति जनाएपछि पर्खाल निर्माण रोकियो ।
१० वर्षदेखि ८ सय ५० मिटर सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा ताम्रागंगादेखि गोकर्णसम्मको ४ किलोमिटर करिडोरसमेत प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय माधव पुडासैनीले बताए ।
नगर परिषद्बाटै काम गर्ने निर्णय गरेर डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौ र कोषलाई पत्राचार गरिएको कागेश्वरी–मनहरा नगरपालिका मेयर कृष्णहरि थापाले बताए ।
‘यो सडक अब कुनै पनि हालतमा निर्माण हुन्छ, जनता हिँडने सडक बन्द हुन सक्दैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सडकको विकल्पमा यसअघि नै ठेक्का भइसकेको सुरुङ मार्ग निर्माणमा नगरपालिका अग्रसर हुन्छ ।’ कोषले सुरुङ मार्गको लागि तयार गरेको डिजाइनसहित डिभिजन सडक कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
ठेक्का भएको सात वर्ष बित्दासम्म ठेकेदारसँग सम्झौता तोडिएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकासको स्वीकृति नहुँदा काम रोकेको छ । अहिले पुनः पुरातत्व विभागले युनेस्कोको स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउको छ । कोषले पनि सुरुङ निर्माण गर्न सहमति दिने गरी डिजाइन डिभिजन कार्यालयमा पठाएको छ
तिलगंगा–ताम्रागंगा सडक पूर्ण सञ्चालन नहुँदा ६ वटा नगरपालिकाका बासिन्दा सडक उपभोगबाट बञ्चित छन् । ‘हामीले दैनिक आवातजावत गर्ने बाटो चाहिन्छ भनेका हौं, पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचिबाट हटाउनुपर्छ भनेका छैनौं,’ स्थानीय पुडासैनीले भने ।
२०५२ सालबाट सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली सेनाले २०५५ सम्म सर्वसाधारण हिडडुल गर्ने चार वटा बाटो बन्द गरँएको थियो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि स्थानीयको सक्रियतामा सडक सुचारु भएको थियो । वैकल्पिक बाटो सञ्चालन भए गौशला, चाबहिल क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामसमेत कम हुने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको दाबी छ ।